University of Sussex - Study in UK. Wezemfundo e England
University of Sussex Yokuxhumana
Ungakhohlwa xoxa University of Sussex
Bhalisa at University of Sussex
The University of Sussex kuyinto ehamba phambili imfundo ephakeme kanye nocwaningo isikhungo eduze Brighton, e eningizimu yeNgilandi. Sussex wayengowokuqala igagasi elisha amanyuvesi UK eyasungulwa ngo-1960, kokuthola Royal Charter yayo e 1961.
ucwaningo Innovative kanye nama-scholarship
Sussex kuyinto ehamba phambili iriseshi yaseyunivesithi, njengoba kuveziwe embikweni okhuthaza 2014 Ucwaningo Excellence Framework (REF). Over 75 per cent of umsebenzi ucwaningo Sussex is bahlukaniswe njengoba izwe ehamba phambili (4*) noma omhlaba omuhle (3*) mayelana okuvela, Ukubaluleka okukhulu.
amaphuzu avelele ngalinye REF 2014 Imiphumela zihlanganisa:
Sussex Umlando kwaba ukuzithoba Umlando ezilinganiswe in the UK izinga Imiphumela yayo ucwaningo
Ukuthunyelwa Sussex English zanda zisuka kwezingu-31 kuya 9 phesheya UK kusukela ucwaningo wokugcina yekuhlola sivivinyo 2008
84 wamaphesenti ucwaningo yeNyuvesi nomthelela Psychology ngamunye walinganiswa ngokuthi phezulu ebangeni kungenzeka, 4*
Sussex Geography wayenamandla kakhulu 4* rated ucwaningo umthelela kwanoma iyiphi ukuzithoba Geography phesheya UK.
Kukonke, University yafakwa wama-36 (ezindawo zezemfundo multi-izigwegwe) by GPA.
The University of Sussex ine phezu 14,000 abafundi, zazo phezu kwengxenye yesithathu postgraduates. ukucabanga Creative, ukwehluka pedagogic, inselele nabanengqondo futhi interdisciplinarity bebelokhu ayisisekelo njalo lokuthola imfundo Sussex.
Umgomo wethu ukuletha izinhlelo yokufundisa nokufunda ukuthi bayatshelwa ucwaningo samanje, zinhle kubafundi bazo zonke izizinda tekuhlalisana kutemnotfo kanye zamasiko, futhi yiziphi ukuletha amakhono for life.
Sussex uye wazakhela idumela emisha kanye ugqozi, futhi ikhanga ongqondongqondo eliphambili abacwaningi. Sine phezu 2,100 abasebenzi, kuhlanganise azungeze 1,000 kothisha kanye nocwaningo, okuyinto, phezu 300 kukhona ucwaningo kuphela. We zibale abawinile ezintathu Nobel Prize, 14 Abafo of the Royal Society, 12 Abafo of the British Academy kanye winner ohlonishwa Crafoord uMklomelo on ubuhlakani bethu.
Kusukela esisekelweni salo, Sussex okwaba nombono wezizwe ozayo imisebenzi yayo academic sengqondo salo. Inyuvesi edonsela abasebenzi nabafundi ukuba campus yayo phezu 120 emazweni ahlukahlukene emhlabeni jikelele. Cishe ingxenye yesithathu yomphakathi abasebenzi zivela ngaphandle UK.
Ucwaningo lwethu tackles nezindaba ezinkulu zomhlaba, ezindaweni ehola ubuchwepheshe ezifana nokuguquguquka kwesimo sezulu kanye nezifundo nentuthuko. Inyuvesi ine links olunzulu izikhungo eziningi emhlabeni wonke, ezifana Peking University, National Taiwan University kanye nohlelo Harvard-Sussex.
Sussex enye enhle kunazo izindawo campus eBrithani. Kufakwe parkland rolling onqenqemeni Brighton, campus ihlanganisa bokwakha imiklomelo izikhala green ovulekile. Emagcekeni Uzungezwe yinhlangano South Downs National Park, kodwa imizuzu embalwa nje kude nomuzi zaziba nezingxoxo Brighton & Hove.
Kwadalwa Sir Basil Spence, izakhiwo ezakha inhliziyo campus zanikezwa isimo isakhiwo efakwe ohlwini e 1993. Falmer House ungomunye izakhiwo zemfundo ezimbili kuphela e-UK ukuba abe Grade I efakwe ohlwini e kuqashelwa inzalo yayo kungemalengiso.
Business kanye nomphakathi
Sussex has a emasikweni akudala exoxisana ngezindaba zebhizinisi kanye nomphakathi, esaqhubeka nanamuhla ngokusebenzisa imisebenzi efana Sussex Innovation Centre, izinkulumo zeningi futhi enze inkonzo yokuthwala umphakathi. Umgomo wethu uwukusiza amabhizinisi kanye nezinhlangano esifundeni ukuthuthukisa amazinga abasebenzi ikhono ephakeme ngokusebenzisa ukuqeqeshwa, futhi ashukumise nemibono emisha ngokusebenzisa ukubambisana nezinye izikhungo ngaphandle Sussex kuzuze umphakathi seNingizimu neAfrika.
I Sussex Innovation Centre inikeza ukuxhasa indalo kanye nokukhula nobuchwepheshe- kanye nezinkampani olwazini in Sussex. Manje Centre olukhulayo ibhizinisi imvelo iminyaka ecishe ibe ngu 80 Izinkampani high-ukukhula. Kusukela ekudalweni yayo phezu 160 Izinkampani ziye zasekelwa ngesikhathi Centre; inzuzo okuqongelelwe manje phezu £ 250 million kanti izinkampani njengamanje siqashe Inqwaba yabantu ngayo endaweni.
School of Business, Ukuphathwa kanye nezomnotho
SPRU – Isayensi yemfihlo Research Unit
School of Education and Work Social
Work Social and Social Care
School of History, Art Umlando Philosophy
School of Law, Ezombusazwe and Sociology
Ezinto eziphilayo ezinto eziphilayo nasemkhakheni wezinto
Evolution, ukuziphatha kanye nemvelo
umonakalo Genome kanye nekusimama
Emzamweni ukusungula eyunivesithi ukukhonza Brighton, umhlangano womphakathi yilowo owaqhutshelwa e-December 1911 eRoyal inkundla ukuze uthole izindlela ukuxhasa ukwakhiwa enyuvesi; iphrojekthi sanqamuka ngeMpi Yezwe I, futhi imali yaphakamisa yayisetshenziswa esikhundleni sokuba izincwadi theMunicipal Technical College.
Umqondo lavuselelwa ngo-1950 futhi, ngo-June 1958, uhulumeni wagunyaza kohlelo corporation sokuba enyuvesi Brighton, ukuze sibe ngabokuqala isizukulwane esisha kulokho okwabizwa okwenza aziwe njengomhlobo plate glass amanyuvesi. Inyuvesi yasungulwa ngenxa inkampani 1959, nge-sisekelo wasebukhosini sigcwaliswa ku 16 August 1961. inhlangano Inyuvesi aphula bomhlaba bube busha lokubona campus ihlukaniswe Schools of Study, abafundi bakwazi ukuzuza imfundiso imvelo multidisciplinary. Sussex kungagcizelela umsebenzi cross-izigwegwe, ukuze abafundi kwatholakala eyunivesithi lahlukene isizinda noma 'zesimo’ ulwazi umphelelisi kuchwepheshe zabo 'core’ amakhono nobe esifundvweni endaweni ethile.
Sussex babonakala nge ushintsho kwempi social, futhi wazakhela idumela radicalism. Ngo 1973, 500 abafundi ngokomzimba kwavimbela United States uhulumeni Umeluleki Samuel P. Huntington kusukela ekwetfula inkhulumo on campus, ngenxa yokuhileleka wakhe YaseVietnam.
Ezama ngilidlulisele kuzithameli yesimanje, inyuvesi wakhetha 2004 ukuze kube lula logo yayo kusukela elingenamikhono original izingalo samanje “nathi” logo. Usekela-Shansela of the University echazwe kahle ukuthi singobani omusha ezibukwayo “liyithuluzi eliyinhloko lokho kuyoba look fresh futhi uzizwe for Sussex. It kusekelwe embonweni inyuvesi kanye namagugu, ngokwabo isitatimende lokho esifisa kube: ukuphayona, creative, international, omuhle, kuhlanganyele futhi inselele.”
Uyafuna xoxa University of Sussex ? Noma yimuphi umbuzo, imibono noma ukubuyekezwa
University of Sussex kumephu
Izithombe: University of Sussex Facebook ezisemthethweni
University of Sussex Izibuyekezo
Joyina ukuze kuxoxwe University of Sussex.